Vaovao - Potika fanaka tena ilaina isaky ny efitrano fandriana
Sombin-javatra fanaka tena ilaina isaky ny filan'ny efitrano fatoriana
Amin'ny lafiny maro, ny efitrano fatoriana no efitrano ilaina indrindra amin'ny trano rehetra. Manampy anao miala sasatra sy mamelombelona izany aorian'ny andro lava, ary ny famolavolana ny efitranonao dia tokony hanana tanjona hananganana tontolo mety hampiroborobo ny torimaso. Ny fampiasam-bola amin'ny fanaka mety dia afaka manampy anao hahatratra izany ary hampiroborobo ny kalitao sy ny haben'ny torimasonao. Andao hojerentsika ny sasany amin'ireo fanaka ilaina amin'ny efitrano fatoriana.
1. Seza mampahazo aina
Ianao ve ilay karazana olona tia mamaky na mitsoka sôkôlà mafana iray kapoaka alohan'ny hatory? Betsaka ny antony hividianana fanaka, fa ny manana seza ahazoana aina ao amin'ny efitranonao dia mety aminao. Hanampy anao hiala sasatra sy hiala sasatra izany rehefa miomana hatory ianao. Azonao atao ny mahazo seza, sandry, na seza mihozongozona mihitsy aza. Hiankina amin'ny filanao sy ny safidinao izany. Ankoatry ny fanatsarana ny fampiononana, ny fanampiana ny fanaka mety dia afaka manatsara ny efitranonao.
2. Farafara tsara
Ny fandrianao no fanaka tena ilaina indrindra ao amin'ny efitranonao. Ny kidoro ahazoana aina sy ny endriny mahafinaritra dia mandeha lavitra amin'ny fampiroboroboana torimaso mahasalama sy mandry fahizay. Raha te-hahita traikefa matory tsara kokoa ianao dia tokony hieritreritra ny hampiasa vola amin'ny farafara am-pandriana sy malalaka ary milamina.
3. Tabilaon'ny fandriana
Miaraka amin'ny fanaka mety, azonao atao ny manova ny efitrano fatoriana mankamin'ny fiverenan'ny mpanjaka. Ny latabatra eo am-pandriana dia sombin-javatra lehibe isaky ny efitrano fandriana. Izy io dia mameno ny fandrianao ary manampy anao hitazona ireo zavatra ilaina amin'ny alina ao an-tsainao ka tsy mila miala eo am-pandriana ianao na mihetsika rehefa hatory. Eto ianao dia afaka mametraka rano iray vera, mamaky solomaso, boky na fanafody mba ho mora azo rehefa any am-pandriana.
4. Akanjo fitafiana
Ny fitafiana dia fanaka tena ilaina amin'ny trano fatoriana rehetra. Izy io dia mitazona ny zavatra ilaina amin'ny fitafiana rehetra ary mitazona ny akanjo ho voalamina tsara. Izy io koa dia mampihena ny fihoaram-pefy ao amin'ny efitrano fandriana amin'ny alàlan'ny fanangonana ny zava-drehetra. Azonao atao ny misafidy akanjo mitokana na akanjo tsy miorina arakaraka ny safidinao.
5. Latabatra fiakanjo
Ny efitrano fatoriana nofinofy rehetra dia tokony ahitana fitafiana. Manampy ny hakantony izany ary manampy anao hitazona ny entanao ho voarindra. Ny mpanamory dia manolotra fampiasa isan-karazany, toy ny fitehirizana tsara ny kojakojanao manokana, akanjo, vola kely, na zavatra kely hafa. Ankoatry ny fitehirizana dia mitondra haingon-trano fanampiny ho an'ny efitranonao ny mpitafy akanjo. Ny tena zava-dehibe, ny manampy fitaratra dia manampy anao hitazona ny fitafianao manokana sy ny bika aman'endriny isan'andro.